"Dhadhanka Seychelles" waxay u dabaaldegtay kulankii ugu horreeyay ee rasmi ah oo lala yeesho shuraakada UAE
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » "Dhadhanka Seychelles" waxay u dabaaldegtay kulankii ugu horreeyay ee rasmi ah ee lala yeesho shuraakada UAE
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kariska • dhaqanka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Imaaraadka Carabta
"Dhadhanka Seychelles" waxay u dabaaldegtay kulankii ugu horreeyay ee rasmi ah ee lala yeesho shuraakada UAE
Munaasabadda kulankii ugu horreeyay ee rasmi ah ee Mr. Sylvestre Radegonde, Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Dalxiiska Seychelles, oo ay weheliyaan la-hawlgalayaasha dalxiiska ee Bariga Dhexe, Xafiiska Dalxiiska Seychelles ayaa martigeliyay munaasabadda "Dhadhanka Seychelles" ee Jumeirah Emirates Towers fiidkii Talaadada. , Oktoobar 26.
Munaasabadda ayaa waxaa ka mid ahaa shaqsiyaad saameyn ku leh dalka Imaaraadka Carabta, sidoo kale waxaa goob joog ka ahaa saxafada iyo mooryaanta iyo ganacsatada.
Martida ayaa loo qaaday safar macaan oo ay ku jiraan cuntooyin macaan sida qumbaha, jajabka muuska iyo cabitaanada maxaliga ah.
Maaddaama xannibaadaha safarka ay bilaabeen inay fududeeyaan dhammaan dunida Carabta, dad badan ayaa awood u leh inay naftooda u arkaan dhinacyada dhaqamada hodanka ah ee Seychelles.
Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Dalxiiska oo ay wehliyaan xubno kale oo ka socday dowladda Seychelles ayaa ka qeyb galay munaasabadda. Wasiirka Dhalinyarada, Ciyaaraha iyo Qoyska, Marie-Celine Zialor; Wasiirka la magacaabay iyo Wasiirka Kalluumeysiga, Jean François Ferrari; Duqa magaalada Victoria, David Andre; iyo mas’uuliyiin kale oo caan ah oo ka tirsan dowladda Seychelles Waxa uu Wasiir Radegonde kala qayb galay soo dhawaynta martida oo ay ka mid ahaayeen shakhsiyaad badan oo saamayn ku leh dalka Isu-tagga Imaaraadka Carabta, sidoo kale waxa ka soo qayb-galay saxafada kala duwan ee warbaahinta, bahda saxaafadda, iyo bah-wadaagta ganacsiga.
Wasiirka waxa kale oo hawshan ku wehelinayey Xoghayaha Guud ee Dalxiiska, Sherin Francis, iyo Agaasimaha Guud ee Suuqgeynta Goobaha, Bernadette Willemin, oo labadooduba halkaas u joogay soo dhawaynta martida.
Intii lagu guda jiray fiidnimadii xiisaha lahayd ee xiisaha badnayd, oo ka horraysa maalinta Qaranka Seychelles ee Expo 2020 Dubai, martida waxaa loo qaaday safar ay ku ogaanayaan udgoonka Seychelles, halkaas oo lagu soo bandhigay cuntooyin macaan oo ay ka mid yihiin nougat qumbaha, jajabka muuska iyo cabitaannada maxalliga ah. halka ay ku faraxsanaayeen codadka Seychelles Isham Rath iyo ciyaaryahanka Saxophone Jean Quatre, laba fanaan oo caan ah oo Seychelles ah.
Wasiir Radegonde ayaa khudbadiisa ku yidhi: “Iyadoo ay tahay booqashadii ugu horreysay ee aan ku tago Bariga Dhexe aniga oo ah wasiirka dalxiiska, waxaan jeclaan lahaa inaan uga mahadceliyo soo dhawaynta cajiibka ah ee ay ii fidiyeen shacabka Imaaraadka Carabta. Xidhiidhka aanu la leenahay Imaaraatka Carabta waxa uu ahaa mid had iyo jeer isku dhow oo gaar ah. Tan iyo markii uu xiriirka gobolka soo bilowday ku dhawaad ​​labaatan sano ka hor, Imaaraadku wuxuu ahaa dalka koowaad ee bariga dhexe ee booqda jasiiradahayada toban sano oo xiriir ah.
Isagoo ka hadlaya saamaynta masiibada ah ee jasiiradaha, Mr. Radegonde wuxuu xusay: "Waxaan aad ugu firfircooneynay qaadashada tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si loo hirgeliyo shuruudaha safarka ee ku habboon si aan u ilaalinno muwaadiniintayada iyo martidayada labadaba. Mahadsanid, shaqadeennii adagi waa ay miro dhaliyeen. Waqtigan xaadirka ah, ku dhawaad ​​72% dadkeena ayaa si buuxda loo tallaalay. Taas, waxaan hadda si rasmi ah ugu dhawaaqi karnaa Seychelles inay tahay waddan ammaan ah oo dalxiisayaasha ah."
Axmed Fatxallah oo xaflada ka hadlay. Dalxiiska Seychelles Wakiilka fadhigiisu yahay Dubai, ayaa yiri: "Runtii aad ayaan ugu faraxsanahay ka soo qaybgalka xafladan. Waxaan halkan uga mahad celinaynaa marti sharaftan maanta noo soo dhawaysay iyo sida wanaagsan ee ay noogu soo dhaweeyeen wasiir Radegonde oo safarkiisii ​​ugu horeeyay ku tagay isagoo ah wasiirka dalxiiska ee bariga dhexe. Maaddaama xannibaadaha socdaalku ay bilaabeen inay fududeeyaan dhammaan waddamada Carabta, waxaan rajaynaynaa in dad aad u tiro badan ay awoodaan inay iskood u arkaan dhinacyada kala duwan iyo dhaqamada hodanka ah ee Seychelles. "
Avant-goût ee waayo-aragnimada Seychelles ayaa diyaar u ah kuwa soo booqda jasiiradda-qaranka pavilion ee EXPO 2020, Mrs. Francis waxay xustay, "Kuwa danaynaya inay la kulmaan naftooda 'Dhadhanka Seychelles' halkan Dubai, waxaan joognaa Waxaan ku faraxsanahay inaan ku wargeliyo inay hadda si raaxo leh ku sameyn karaan Pavilion Seychelles oo ku yaal EXPO."
Sida ku cad hal-ku-dhegga 'Ilaalinta Dabeecadda,' Seychelles waxay adeegsanaysaa madalkeeda la dheereeyey ee EXPO 2020 Dubai si ay u muujiso dadaalka ay sameeyeen hay'adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ahba si ay u ilaaliyaan hantida dabiiciga ah ee Seychelles iyada oo loo marayo ilaalinta deegaanka dabiiciga ah iyo kala duwanaanshaha noole ee jasiiradaha quruxda badan. "
"Waxay ahayd farxad buuxda inaan ku qaadno martidayada UAE socdaalkan quruxda badan ee dhadhanka jasiiradahayada. Waxay ahayd wakhti ku habboon kooxda Dalxiiska Seychelles inay la xidhiidhaan shuraakadayada warshadaha,” ayay tidhi Bernadette Willemin.
Iyadoo 18,000 oo booqdayaal ah laga duubay UAE ilaa Janaayo 2021, waddanku waa isha labaad ee isha ugu sareysa Seychelles.